Lakulan: Ninka is baray ku dhawaad 100 luqadood oo afafkii hore ah | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Lakulan: Ninka is baray ku dhawaad 100 luqadood oo afafkii hore ah
Lakulan: Ninka is baray ku dhawaad 100 luqadood oo afafkii hore ah
Posted by: Mahad Mohamed July 25, 2020
Himilo – 86-jir lagu magacaabo Riccardo Bertani, waa nin fariid ah.
Ka dhashay qoys beeraley ah oo ku nool Caprara oo ah degmo hoos tagta Reggio Emilia ee dalka Talyaaniga, wuxuu kaga haray tacliintiisa dugsiga hoose isaga oo ku halgamay inuu tarjumo oo uu keydiyo ku dhawaad boqol luqadood oo dhif iyo dabargo’na ka ah dunida maanta.
“Marabin inaan waddadaas qaado. Waana ka haray,” ayuu Bertani ka yiri go’aankiisa uu kaga tagay iskuulka wax-yar kadib waxbarashadiisa hoose. “Waxaan xiisaynayay waxyaalo kale. Waana inaan iraahdo in hal macalin oo kaliya uu fahmi karay go’aankayga.”
Sheegashadiisa ah inuu cuncun ka qaaday barashada xisaabta, wuxuu sida wiilasha kale ee kula noolaa degmada bilaabay inuu beeraha ka shaqeeyo, hayeeshe hadana wax-yar kadib wuxuu garwaaqsaday inuusan ku fiicneyn beer-falka ama limista.
Waana taas markii uu bilaabay wixii ku weynaa dubaaqiisa oo aheyd aqrinta iyo barashada afafka.
Maadaama Riccardo aabihiis uu xubin ka ahaa xisbiga shuyuuciyadda ahaana maayarkii hore ee degmada, badi buugaagta yiillay gurigooda waxaa u badnaa af Raashiyaan. In kasta oo uusan fahmi kareyn luqadda, hadana wuxuu jeclaaday barashadeeda.
Wuxuu bilaabay raadinta qorayaal uu kamid ahaa Lev Tolstoy isaga oo aqriyay waxyaalihii ay ka qoreen Talyaaniga. Wuxuuna isticmaalayay buugga naxwaha Ruushiyaanka si uu u barto asalka luqadda lagu qoray.
Siyaalaha qaar, wuxuu xiiseeyey dalalka bari sida Ruushka iyo Ukraine. 18-kii sano ee lasoo dhaafay ma sameyneyn wax aan ka aheyn turjumidda buugaag kasta oo dhinacaas uga yimaada.
Wuxuu sidoo kale u kuur-galay dhaqamada kala duwan ee dadka Siberian-ka, Mongolian iyo Eskimos ku kala duwan yihiin.
Previous: Maxay la gaar tahay Swizerland?
Next: Arsenal £13.6m ku dooneysa cayaaryahanka katirsan Sporting Lisbon